ဘာသာစကားတိုင်းမှာသုံးနိုင်တဲ့ စကားလုံး - YOYARLAY Digital Media and News
Published: August 17, 20191:06 pm Updated: 1:14 pm
တစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှုပ်ထွေးသလိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာ “Huh?” လို့ ပြောကြလေ့ရှိတာကို တစ်ခါလောက်တော့ ကြားဖူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာမှမထူးခြားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့ သူ့လိုထူးခြားမှုရှိတဲ့စကားလုံးမျိုးက သိပ်များများတော့ရှိမနေပါဘူး။
ဘာများထူးခြားနေလို့လဲ? ကမ္ဘာပေါ်မှာသုံးစွဲနေကြတဲ့ဘာသာစကားအားလုံးမှာ ဒီစကားလုံးကိုသုံးလို့ရနေတာက ထူးခြားတာပါ။ အများအားဖြင့် ဘာသာစကားတွေဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်မှု၊ တူညီမှု ရှိမနေတတ်ကြပေမဲ့ “Huh? ” စကားလုံးကိုတော့ ဘယ်လိုဘာသာစကားနဲ့ပြောသည်ဖြစ်စေ ကြားသူတိုင်းသဘောပေါက်နားလည်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Previous Previous post: မြန်မာစာကို စနစ်တကျရေးသားနည်း
Next Next post: ရုပ်ရှင်ထဲမှာထည့်သွင်းပြသခွင့်မရှိဘူးလို့ တားမြစ်ခံခဲ့ရဖူးတဲ့မြင်ကွင်း
ကျွန်တော်တို့တွေ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပထမဆုံးအကြိမ်တွေ့ကြတဲ့အခါ တစ်ဖက်လူရဲ့အပြုအမူကိုကြည်ပြီး ဒီလူက ရိုးသားဖြောင့်မတ်တဲ့သူလား။ ဥာဏ်ပညာကြီးရင့်တဲ့သူလား။ ဒါမှမဟုတ် ညှာတာထောက်ထားစိတ်ရှိတဲ့သူလား ဆိုတာတွေကို အကဲခတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပါတယ်။ အလုပ်အင်တာဗျူးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပထမဆုံးအကြိမ် ဒိတ်လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အသေးအမွှားကိစ္စလေးတွေမှာကအစ အပြုအမူ၊ အပြောအဆိုတွေက အရေးကြီးပါတယ်။ ၁။…
Published: June 11, 20184:01 am Updated: July 3, 20203:04 pm
အသက် (၂၀) ရောက်လာရင် ဘယ်လိုစိတ်ထားတွေ ထားတတ်သင့်ပြီလဲ
သင်က အသက်(၂၀) အရွယ် ရောက်နေပြီဆိုရင် သင့်ကိုယ်တိုင်အတွက်ကော၊ အတက်ပညာပိုင်းအရပါ ကြီးမားတဲ့ အခန်းကဏ္ဍမှာ ပါဝင်ရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ဘဝနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောင်းလဲမှုအနည်းငယ်လုပ်ရတော့မှာပါ။ အသက် (၂၀) ရောက်ရင် ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှုတွေ၊ ဘယ်လိုစိတ်ထားတွေထားရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့…
Published: May 28, 20194:19 pm Updated: 4:50 pm
တစ်ခါက ခြင်္သေ့အိုကြီးတစ်ကောင်ဟာ အသက်အရွယ်အိုမင်းလာတာကြောင့် သားကောင်ရှာဖွေရာမှာ အခက်အခဲဖြစ်လာပါတယ်။ ” ငါ အရင်လိုမျိုး သားကောင်တွေကို လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့မဖမ်းယူနိင်တော့ဘူး။ ဒီတော့ နေ့စဉ်ဝမ်းရေးအတွက် တစ်ခုခုလုပ်မှဖြစ်တော့မယ်”လို့တွေးမိပြီး အကြံတစ်ခုရလိုက်ပါတယ်။ Post Views: 2,487